Doorka Wasiir Samsam Ee Koboca Dhaqaalaha Qaranka |
Doorka Wasiir Samsam Ee Koboca Dhaqaalaha Qaranka
Ma da’furin ogaalkay
Xaska dabada maan gelin
uma dhiibin duudduub
Doobigeedi may dhimin
Wax is doorshey may dhicin
Afartaa xan durugtiyo
Danni jira wax sheeggii
Daalacan, M I Warsame Hadraawi
Sida aynu ka warqabno, waxa muddooyinkan danbe aad isku soo tarayay horumarka la majeertey, waxabadka muuqda iyo isbadalka togan ee ka hana-qaadey wasaarada Maaliyada JSL. Marwo Samsam Abdi Adam intii ay hogaanka u haysay Wasaaradaasi waxa ay la jaanqaadey nidaamka casriga ah ee caalamka.
Waxa aynu halkan ku soo gudbin doonaa qeybo ka Mida qormooyin Xidhiidha oo Ka hadlaya Guulaha iyo Horumarka ka Tisqaadey Wasaarada Maaliyada JSL intii ay Madaxda ka ahayd Wasiir Samsam Abdi Adam.
Horumarka Dhaqaale ee Dalka:
Wasiir Samsam Abdi Adam oo hore u soo qabatey xilka wasaarada waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa laga wada dharagsan yahay sidii ay uga soo shaqaysay wasaaradaasi , hawilhii balaadhnaa ee ay ka qabatay iyo adeegyadii horumarineed ee ay ka fulisay.
Wasiir Samsam markii ay ka soo dhalaashey hawshii wasarada waxbarashada, tayaysay goobihii tacliinta, horumarisey adeegyadii waxbarashada , kaabtey qabyaddii jirtey iyada ka hor, waxa uu Madaxweynaha J. Somaliland u wareejiyay inay noqoto wasiirka maaliyada JSL.
Wasiir Samsam isla markii ay la wareegtay xilka wasaaradaasi waxa ay bilowdey sidii caadada u ahayd in isbdel muuqda oo horumar ku suntan ay ka hirgeliso halkaasi, waxaanay xooga saartay sidii aanu dhaqaalaha dalku halka uu taagan yahay aanu hoos uga dhaceen inuu kor uga sii kaco mooyee.
Wasiir Samsam, iyada oo ka duuleysa aqoonta iyo khibrada ay leedahay kana warqabta hawsha baaxada leh ee u taal, waxa ay dhexda u xidhatay in wasaaradda dhaqaalaheeda ay kor u qaado, iyada oo wax lacag dhigaal ah looga tegin, ayey ku guulaysatay in miisaaniyad ka badan tii hore ay xidho, iyada oo samaysay odoros cusub oo hore Somaliland u gaadhin, taas oo ah in ku dhow $300 Million in Miisaaniyadda qaranku noqoto.
Waxa kale oo ay hagaajisay nidaamkii wasaaradda Maaliyadda, adeegyadii ay bulshada u haysay wasaaradu ayaa gaadhay meel sare, wada shaqayntii laamaha kala duwan ee wasaarada ayaa iyaguna si toosa isugu xidhmey, kuwaas oo noqdey qaar la dardar geliyey, si fiicana isula jaan qaadey.
Wasiir Samsam oo ah qof karti iyo hibo-ba Eebe u siiyey inay halka ay joogtaba hagaajiso, hadba hay’adda ay madaxda ka tahayna dhaqaajiso, waxa ay muddo yar gudeheed ku guuleysatay inay nidaamiso wasaarada maaliyada, dhaqaalihii yaraa ee yaaleyna way tashiilisey isla markana waa ay xafidey, si hufan oo daacadnimo lehna wey u ilaalisey. Helitaanka ay wasaarada maaliyadu heshay qof aqoonyahan ah, daacad ah, kartina leh, ayaa sabab u noqotey in dhaqaalihii qaranku kobco, gaadhana halkii ugu sareysay.
La Soco ………………..!